* Light Of Myanmar *: အနှစ် ၂၀ ထပ်မစောင့်ချင်ရင် …. ဒါလေးတွေကိုလုပ်ပါ
လူထုအုံကြွမှု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်ကြာမှ တခါလောက်ပဲ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ အခုတကြိမ် မအောင်မြင်ရင် နောက် နှစ် (၂၀) ထပ်စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ ကလည်း သေနတ်တွေရှေ့မှာ ဆန္ဒပြရဲအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ တွန်းအား ပေးနေပါတယ်။ နအဖကလည်း 88 ဆန္ဒပြပွဲ အတွေ့အကြုံရှိတော့ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ ပါးနပ်နေပါပြီ။
ပြည်တွင်း လူတွေ နေရာ ကနေ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်သူကများ လမ်းပေါ်မှာ အသတ်ခံ ချင်မှာလဲ? သေနတ်တွေရှေ့မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ဆန္ဒပြရဲမှာလဲ?။ ဒါကြောင့်လဲ ဆန္ဒပြပွဲက ကြီးသင့်သလောက် မကြီးဖြစ်နေတာပါ။ အဲလိုနဲ့ လူတဖြေးဖြေးနည်းသွားပြီး ဒီဆန္ဒပြပွဲကြီးဟာ မကြာမီ လုံးဝ ကျဆုံးဖို့ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အဲလိုမဖြစ်ချင်ရင် ဗျူဟာ ပြောင်းရပါမယ်။ 1988 နည်းဗျူဟာ အဟောင်းကြီးကိုပဲ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သတိထားဖို့ ကိစ္စတစ်ခုကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အားလုံးကို မယုံပါနဲ့။ သူတို့အထဲမှာ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး အဒွန့်ရှည်မှ (ဒီမိုကရေစီကို လုပ်စားနေသူတွေ) စီးပွားဖြစ်မယ့်သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ နအဖမပြုတ်ကျအောင် ပညာသားပါပါ နဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ဆိုလိုချက်ကို အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါမှာ နေတဲ့သူတွေ သဘောပေါက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် သတိရှိပါ။
ထိရောက်ဆုံး ဗျူဟာ အသစ်
ဆန္ဒပြပွဲ မအောင်မြင်ဖြစ် နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာက ဘာလဲဆိုတာ သိပါသလား?
ပြည်သူ အများစု မပါလို့ပါ ။
ပြည်သူ အများစုက ဘာဖြစ်လို့ ဆန္ဒမပြလဲ?
လူအများစု ပါဝင်ဆန္ဒပြအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
မကြောက်နဲ့ လုပ်သာလုပ်လို့ ပြောပြီး အတင်းတွန်းနေလို့လည်း သူတို့ ထွက်ပြီးဆန္ဒပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပစ်မခံရဲလို့ ဆန္ဒမပြတဲ့ ကိစ္စမို့ ဘယ်သူမှ ထွက်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အပစ်မခံရအောင် စဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်။်စဉ်းစားထားတာလေး တွေကတော့
(၁) မနက်၊ နေ့လည်၊ ညနေ၊ ညပိုင်း တနေ့လေးကြိမ် မေတ္တာသုတ်ကို အိမ်တိုင်းမှ ဖွင့်ပါ။ မေတ္တာသုတ်အသံဟာ မြန်မာပြည်ကြီး ပြောင်းလဲဖို့လိုလားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပြ အသံဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာသုတ် ဖွင့်လို့ ဘယ်စစ်သားမှ အိမ်ထဲကို လာပစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလဲ လုပ်ရဲပါတယ်။ (စစ်သားတွေ ပြောသလောက် မရမ်းကားဘူးဆိုတာ အောက်မှ ဆက်ရေးထားပါတယ်) တချို့လူတွေက ညတချိန်ပဲ ဖွင့်သင့်တယ်လို့ ပြောနေကျပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ သဘောမတူပါဘူး။ ညအချိန်ဖွင့်လဲ ပြီးရော အိပ်ဖို့အချိန်လဲ ရောက်သွားပါပြီ။ ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မနက်၊ နေ့ခင်းတွေမှာ မေတ္တာသုတ် အသံကြားရင် လူငယ်တွေ စိတ်တက်ကြွလာပီး ဆန္ဒပြဖို့ ကြိုးစား လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့ပေါက်ကရ ပြောချင်တဲ့သူတွေက ကတ်ဆက် ဖွင့်တဲ့ အိမ်တွေကို လာဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဖြဲခြောက်နိုင် ပါတယ်။ မယုံပါနဲ့။ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားပါ။ သူတို့မှာ ပြည်သူလူထုတွေ အများကြီးကို ဖမ်းပြီးထားဖို့ နေရာ မရှိပါဘူး။
(၂) အန္တရယ်ကင်းပြီး လုပ်နိုင်တဲ့ ဆန္ဒပြနည်းလေး ကိုလည်း တင်ပြချင်ပါတယ်။ မိမိရပ်ကွက်ထဲမှာ လူစုပြီး တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် မေတ္တာသုတ်ရွတ်သွားပါ။ (ယောဂီဝတ်စုံလေးများ ၀တ်နိုင်ရင် ပိုသင့်တော်ပါသည်။) ဒို့အရေးလုံးဝ မအော်ပါနဲ့။ ဒို့အရေးမအော်လဲ ဘာအတွက် လုပ်နေလဲ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒို့အရေးအော်ပြီး ဆန္ဒပြရင် ရ၀တနဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေက သူတို့ကို ရန်ပြုမှာ စိုးရိမ်ပြီး စစ်တပ်ကို အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။ အဲလို ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင် စစ်တပ် အလွယ်တကူ လာရောက် ပစ်ခတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စစ်တပ်လာရင် အမြန်လူစုခွဲပီး မိမိအိမ်တွေထဲ ၀င်နေပါ။ စိတ်ကူးထဲမှာ တွေးကြည့်ပါ။ ယောဂီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ မေတ္တာသုတ် တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် ရွတ်နေတာ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေလဲဗျာ။ စစ်တပ်လာရင် အိမ်တွေထဲ ၀င်နေကျပေါ့။
(၃) လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ ထွက်ပြီး မေတ္တာသုတ် ရွတ်ချင်ရွတ်ပါ။ ဘယ်တော့မှ စစ်တပ် (၀ါ) ရဲတွေနဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူတို့လာတာမြင်ရင် လူစုခွဲပါ။ ပျောက်ကြား နည်းစနစ်ကိုပဲသုံးပါ။ နောက်ပြီး မိမိရပ်ကွက်နဲ့ အဝေးကြီးကို မချီတက်ပါနဲ့။ အိမ်ပြန်ရခက်ရင် နောက်တကြိမ် ဆန္ဒပြဖို့ စိတ်ကုန် သွားတတ်ပါတယ်။
ကျနော် အခုတင်ပြထားတဲ့ သုံးချက်ဟာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး အန္တရယ်ကင်းစွာနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီကို Email ပို့ပြီး ပြောပြပါ။ CBox တွေမှာ လိုက်ပြောပါ။ Forum တွေမှာ လိုက်ပြောပါ။ ၀က်ဆိုက် တွေကို သတင်းပေးပါ။ ကျနော်တို့ သေနတ်ရှိတဲ့သူကို အကွက်ကျကျ မလုပ်ရင် အောင်မြင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Blog တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် စစ်တပ် ရက်စက်တာတွေ ဆိုက်ဝါးလုပ်ထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးမှာ ဘုရားဖျက်ဆီးတာကို ဓါတ်ပုံနဲ့ တင်ပြထားချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဘုရားကို ရိုက်ချိုးခဲ့ တာ တိုင်းရင်းသား စစ်သားလေးတွေဆိုတာ ဘုန်းကြီးတွေ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘာသာခြား စစ်သားလေးတွေပါ။ သူတို့ လုပ်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်သားတွေကို သာသာနာဖျက်တွေလို့ ၀ါးလုံးရမ်းသင့် သလား? တကယ်တမ်း ပြောရရင် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်သားတွေ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတာတွေ ရှိခဲ့တာပဲ။ အထက်က ခရစ်ယာန်ကျောင်းဖျက်ပါ၊ အထက်က ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကို ရိုက်ချိုးပါလို့ အမိန့်မပေးပါဘူး။ စစ်သားလေးတွေဟာ ဆယ်တန်းတောင် အောင်တာမှ မဟုတ်တာ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဖြစ်သွားတာကို ချဲ့ကား မပြောသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ တပ်သားတွေ ဆန္ဒပြသူတွေကို ပစ်ရာမှာ လူမဆန်ဘူးလို့ အတင်းကို စွပ်စွဲနေပါတယ်။ (ရုရှက စစ်သားတွေ ပစ်ခတ်တာကို အားပေးတဲ့ အပြောအဆိုတွေကို အပြစ် မမြင်ပါနဲ့။ သူတို့ကို အချိန်ပြည့်သွားဆဲနေတော့ ဘယ်သူမဆို မခံချင်စိတ်နဲ့ အဲလိုပဲ ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။) ဒီကိစ္စကိုကျနော် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ သေတဲ့ အရေအတွက် ကြည့်ပါ။ စစ်သားတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်နှုံန်းပဲ သတ်တယ်ထားပါ။ အခုထက် အဆ တစ်ရာလောက် သေနိုင်ပါတယ်။ အခုလို သေအပျောက်စာရင်းကို ကြည့်ရင် စစ်သားတွေမှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ မေတ္တာတရား ရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် စစ်သားတွေကို ခွေးနဲ့ နှိုင်းချင်တာလဲ? ဒါလုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
စွမ်းအားရှင်တွေ မစုစုနွေးလူစုခွဲတုံးကလည်း အကြမ်းဖက်မှုကြီးဆိုပြီး နာမည်တပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ စွမ်းအားရှင်တွေလုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြင်သာဆုံးလုပ်တဲ့ အပြုအမှုပါ။ ပုံကြီးချဲ့ မပြောသင့်ပါဘူး။
အဲလို မဟုတ်က ဟုတ်က ဆိုက်ဝါးလုပ်လွန်းတော့ လူတွေက စစ်တပ်ကို ကြောက်သင့် တာထက် ပိုကြောက် သွားပါတယ်။ မသီရိဘာပြောလဲဆိုရင် . . . အိမ်ထဲမှာ မေတ္တာသုတ် ဖွင့်ရင်တောင် စစ်သားက ၀င်ပစ်မယ်တဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဗျာ။
ဒါကြောင့် လူတွေကို ဖြဲချောက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ လုပ်တော့ အကြောက်လွန်ပြီး ဒူးတုံတာနဲ့ ဘာမှ လုပ်လို့မရဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ဘာသတင်းထူးလဲ စနည်းနာရုံသက်သက် Blog တွေကို မသွားပါနဲ့။ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံရင်းနဲ့လဲ အချိန်အကုန် မခံပါနဲ့။ ကျနော် အောက်မှာ ရေးထားတာကို Copy , Paste လုပ်ပြီး ဆီဗုံးတွေမှာ လိုက်ထည့်ပေးပါ။ နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ ထပ် မစောင့်ချင်ရင်ပေါ့။ သွေးမအေးခင် မြန်မြန်လုပ်ပါ။
(၁) မေတ္တာသုတ်ကို မနက်၊ နေ့လည်၊ ညနေ၊ ညပိုင်းများတွင် အိမ်တိုင်းမှ ဖွင့်ပေးပါ (၂) လူငယ်များ မိမိရပ်ကွက်ထဲမှာ မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်ပါ။ (၃) ထိပ်တိုက်မရင်ဆိုင်ပါနဲ့။ ပြောက်ကျားစနစ်ကိုအသုံးပြုပါ
Posted by * In Search of Truth * at 8:28 PM
"စွမ်းအားရှင်တွေ မစုစုနွေးလူစုခွဲတုံးကလည်း အကြမ်းဖက်မှုကြီးဆိုပြီး နာမည်တပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ စွမ်းအားရှင်တွေလုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြင်သာဆုံးလုပ်တဲ့ အပြုအမှုပါ။ ပုံကြီးချဲ့ မပြောသင့်ပါဘူး။"
Are you insane!? How could someone getting beaten up and dragged along the streets likeadog be considered anything under than brutal? As for the 'gentle' approach, can you really say that the praying monks were looking for trouble? They were reciting the bloody myita thote. There can be no execuse for defiling sacred ground with the blood of the holy. Your arguments are likeacracked mirror. Just because you put them together inarational manner does not make itarational whole when the basic argument is already flawed.
Long live the monks
I agree with Light of Myanmar for his strategies to maintain and keep up the demonstrations. People in Burma are now fear of getting killed and beaten. Asaresult, the amount of people who take part in protests is getting smaller, and it would be vanished soon. Therefore modivation is needed by playing Myit Tar Thote for four timesaday for those who have alreay been in protests and for those who are not yet.
ဟားဟား... အရေးအခင်းတုန်းက ဆမူဆာ အောင်ကြီး ဟောပြောသွားသလိုပဲ... စစ်တပ်ကို စိတ်နဲ့တောင် မပစ်မှားနဲ့ ဆိုတာလိုပဲ။ စစ်တပ်ကို မကျေနပ်လို့ တိုက်ပါတယ် ဆိုမှ စစ်တပ်နဲ့ မရင်ဆိုင်နဲ့ဆို ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်မိန်းမနဲ့ ကိုယ် အိပ်နေတော့မှာပေါ့ဗျ။
October 1, 2007 at 1:39 AM
နည်းနည်း လွဲနေသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိကရုဏ်နှိမ်နင်းရေးက သူ့လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနဲ့ လုပ်မှာပဲ။ အဲဒီတော့ ယောဂီဝတ်စုံ ၀တ်ဝတ်၊ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ရွတ်၊ အထက်က လူစုခွဲဆိုရင် ခွဲရမှာပဲဗျ။
ထုံးစံအရတော့ အော်လံပါတဲ့ ကားပေါ်မှာ တရားသူကြီး (သို့မဟုတ်) တရားသူကြီးနဲ့ အဆင့်အတန်း ညီမျှတဲ့လူ ပါတတ်ပါတယ်။ သူနဲ့ အမြဲပဲ ညှိနှိုင်းရင် လူအသေအပျောက် လျော့နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
October 1, 2007 at 2:07 AM
Do not act like Sayar Gyi. Fucker !
Never condemn and give negative comments to peoples' and monks' activities. They gave up everything including life and went on roads.
You are one of Aye Lwin's nasty gang.
Your suggestions are insane and inappropriate.
There is no other way for people to choose to be freedom. This is last of last activities. Do not hope for another 20 years.
It's very pity for monks becoming sandwich phenomena; government kills them, torture them and people are afraid of donating to them.
Lord Buddha ... Come alive and help those suffering in Myanmar.
Head of angels (Thi-kyar-minn) ... Quickly act on bad guys and save all people including monks, nuns in Myanmar(Burma)
Zu-buu-hteik-na-meik-htun-de-kyun ... Myanmar(Burma) .. hoping for the best !
Buddhism people are in worst mood.
(1) it's time for us tobstrategic.
(2) Apparently, we need someone like Aunty Su. We better wake up from daydreaming, govt has put her under house arrest for ages, only God knows when she willbreleased again. We need someone who could lead the whole crowd.
(3) We need Long-termed plan.
(4) U Than Shwe would never give up his power unless we attack him psychologically, i guess.
well, those are just my thoughts.
The following is some brainstorming I got so far. Some could be ridiculous and stupid but hello? It's brainstorming! But remeber these words: "The difference between Insanity and Ingenuity is success made".
1)everyone carry around statuettes or pictures of Buddha AND(some of the soldiers are not Buddhists and very like to be Christians) Holy bible or Holy Cross as shields.(I am assmuing the soldiers belonging to ethnic minorities are Chrisitians)
2)Heard there are criminals dressed up by SPDC as soldiers in the army. Criminal or not, bribe the whole squad more than SPDC does and if they still shoot you.. I can't think of any word equivalent to describe their stupidity.
3) Carry Than Shwe's pics around(pics that cover your body). Than Shwe is very superstitious. Shoot his pic and he'll even shoot Mg Aye or Thura Shweman for doing that.
4) Think, why the simpleton soldiers belonging to ethnic minority are killing people? Coz they admire Than Shwe? No freaking way. If there'saperson to admire for them it couldn't also be Jesus Christ since he never encourages killing. Action heros. Request Schwezenegger or Chuck Norris to giveaspeach that condemn the soldiers for killing people. Hasten the production of the latest Rambo franchise. We need celeb power. Request all those Burmese sexy models out there to act in propagendas. Or give all the soldiers who join forces with the civiliansadozen of porn CDs, weed to smoke or I dunno whatever that stop them from shooting people and start shooting SPDC top dogs.
5) Strike the roots. Kidnap Than Shwe's family and blackmail him Al Qaeda Style.
hm... i like the concept that the blogger has... some of the reader apparently has misunderstood, and of course acted like an a**hole..
anyway... i'm totally behind the ppl and the follower of Buddha demonstrating forabetter living standard...
i'm quite sure the Blogger's intention was do lessen the death but at the same time he would like to encourage everyone to protest... some of u are just too stubborn and short sighted.. i mean.. how many ppl can the govt kill? does he want to kill eveyone who is protesting? then he wouldbdoingafavor to the increasing world population...
anyway.. i do agree the silent and non violent protest that he has suggested, and i totally think that we needalong term plan... rather than rash drastic actions, which ends up in blood-bath.. which has occured in many places, in many different ....
i was reading the other day on the net, they said some ppl are actually not doing meeting secretly but they open up an office and actually conducting the flow of the demonstration... which isagood sign... and i truly believe that only if we stand together as one BURMESE people, regarding of the difference in religion, ethnic groups and background, would we be able to getabetter life of ourselves and others...
God Bless Burma and hope that this will end well... may those whom have given their lives rest in peace ...
October 2, 2007 at 12:59 AM
Wat Blog said...
Although some of his suggestions may bealittle far-fetched, the blogger's overall message is valid.
Many of you people are reacting emotionally to him, throwing insults and blindly praising everyone who protested. Do you not realize that being emotional and irrational undermine the unity of the civilian population asawhole? Of course we feel sorry for the brave people and monks who died, but can we really say that they chose the perfect course of actions every time? No, the protestors, though brave, definitely had strategic flaws.
And you morons who attack him blindly without having any reasonable argument yourselves, are not being as helpful as he is.
ခင်ဗျားတို့နည်းက သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့တော့ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထက်ကစာလေးကိုတော့ ပြန်ပြင်ပေးပါ။ ရက်စက်တာဟာ ရက်စက်တာပါဘဲ။ ယုတ်မာတာဟာ ယုတ်မာတာပါဘဲ။ ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့မှ ပေါ့ပါးအောင်လပ်လို့မရပါဘူး